🥇 ▷ Apple waxay bixisaa ilaa $ 1 milyan oo loogu talo galay dadka baadha iPhone ✅
Apple waxay bixisaa ilaa $ 1 milyan oo loogu talo galay dadka baadha iPhone
Marabtaa inaad kasbato 1 milyan oo doollar? Sidaa darteed waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ka heshaa god badbaado leh Apple iPhone Haa, si aad u hesho dib u dhac halis ah oo fursad u siinaya inay si aan habooneyn u galaan mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ‘Cupertino’ ee macruufka weyn. Caqabadda ayaa sidaas loo bilaabay!
Runtii, xayeysiis waxaa dhowaan loogu talagalay in lagu xoojiyo amniga dhammaan nidaamka macruufka.
Shirkadda Tim Cook ayaa ku yaboohday illaa $ 1 milyan abaalmarinno la siinayo kuwa qalad ku gala taleefannada casriga ah ee iOS. Taasi waa, baarayaasha amniga oo ka heli kara khaladaad muhiim ah caqabadaha amniga Apple iPad iyo, tusaale ahaan, inay marin habaabin ah aaladda aaladda su’aasha ku hayaan.
Amniga Apple iPhone
Waa abaalmarintii ugu weyneyd ee weligeed ay shirkaddu ballan qaado, si loo difaaco taleefannadeeda casriga ah ee iOS vs. haakariska Wax kasta oo tikniyoolajiyaddu ay rajaynayso inay ka caawiso dadaalka lagu xoojinayo amniga iyo xakamaynta gebi ahaanba deegaanka. Taasi waa, iyadoo la kaashanayo kuwa kale, nidaamka iOS oo dhami wuxuu noqon karaa mid amaan badan.
Sidoo kale, maaddaama hay’adaha dawladuhu ay ku adkaysanayaan awooddooda tikniyoolajiyadda, waxay ku bixiyaan dadaal badan sidii ay u hubin lahaayeen asturnaanta. Intaa waxaa sii dheer, waxaa muuqata inay jirrabayaan sii kordhayaan si loo furo Apple iPhone-ka, gaar ahaan haddii ay yihiin kuwa ka soo horjeeda, ama hay’adaha kale ee “xasaasiga ah”.
Ku dhawaaqida, iyo ballanta, waxaa sameeyey Apple. Rafcaanku wuxuu sidaa si aan qarsoodi ahayn u sameeyay intii uu socday shirkii Black Hat, isaga oo u heellan amniga oo lagu qabtay Las Vegas, USA. “Tartanku” wuxuu u furan yahay dhammaan baarayaasha amniga. Intaa waxaa sii dheer, dhammaan aaladda Apple “ee ku jirta dhibaatada” maahan oo keliya iPhones.
Teknolojiyaddu waxay dooneysaa inay sare u qaaddo amniga casriga casriga ah ee ay adeegsato
Tani waxay asaas u tahay caqabadda amniga. Kuwa hela cilladyada muhiimka ah, fadliga ama abaalmarintu waxay gali karaan ilaa hal milyan oo doollar. Waxaa intaa dheer, ma aha oo kaliya macruufka, laakiin sidoo kale barnaamijyada kombiyuutarka ee Mac ayaa lagu daboolay barnaamijkan cusub, iyadoo abaalmarinno kaladuwan ay jiraan.
Abaalmarinta $ 1 milyan, ayaa isna, loo baahan yahay numusus cufus xaaladaha. Ficil ahaan, waxaa loo baahan yahay oo keliya in marin fog laga helo kernel iPhone iyada oo aan wax talaabo ah laga qaadin adeegsadaha sharciga ah iyo milkiilaha.
THE Apple Waxay qaadaysaa dhowr tillaabo oo kale oo lagu fududeynayo shaqada baarayaasha amniga. Xaqiiqdii, arag, tusaale ahaan, horumarinta Apple Modified iPhone, oo leh dhowr moodel oo loogu talagalay ujeedooyinka tijaabada kaliya. Cutubyo ay shirkaddu lafteeda ka dhigto khubaro ku xeel dheer cilmiga.
Ugu dambeyntii, waxaan xasuusanahay in abaalmarintii hore ee ay bixisay Apple, ay ku jirtay $ 200,000 warbixinnada cayayaanka iyo dhiqlaha. Hadda bar ayaa kor u kacay, sidoo kale waxay leeyihiin dhawaaqyada hanjabaadaha ku habboon abaalmarintaas. Ma jeceshahay inaad tijaabiso nasiibkaaga oo aad isku daydid inaad ugaarsato mid ka mid ah cilladdani?